Ngaba uyindawo ekuyiwa kuyo? Uphuma? Okanye umqondiso nje? | Martech Zone
NgeCawa, ngoSeptemba 22, 2013 NgeCawa, ngoSeptemba 22, 2013 Douglas Karr
Umbono wentengiso ye-Intanethi kufanele yohluka kwinkampani ukuya kwinkampani. Sinabaxhasi abaneliseke kakhulu kukuba neendawo ezintle zencwadana ukuze bakwazi ukukhangela uluhlu lwabo lokuthengisa ukuba banendawo entle. Luluvo olubi, kodwa abanye basasokola ukuqonda ubume obusebenzisanayo bewebhu kwaye bayaqhubeka nokuxhomekeka kwizilingo zabo eziyinyani. Zemveli Iindlela zokuthengisa. Ndingathanda ukulahla isifaniso ebendikhe ndacinga ngaso kangangexesha elithile-ukusibuyisela kulwazi oluhamba phambili.
Isicwangciso sakho sentengiso kwi-Intanethi sinokuba yi uphawu, I Phuma okanye a kuyo Ithemba kunye nabathengi. Isicwangciso ngasinye sineendleko kunye nezibonelelo. Umqondiso ufuna izibonelelo ezincinci kwaye unikezela ngempendulo encinci. Ukuphuma kufuna okungakumbi. Indawo ekuyiwa kuyo kakhulu. Unokugqiba njani ukuba isicwangciso sakho sithini?
Ukubonelela ngombala kulo mzekelo, masithi ndiza kuthenga kwaye ndifake iPhilips 55 ″ HDTV. Ke, ndenza uphando malunga neemveliso kunye nolwazi ukuze ndenze ukuthenga okuhle, kwaye ndifunde indlela yokuyimisa kwaye ndiyisebenzise.
Iwebhusayithi yePhilips yi uphawu. Ngaphandle kwamaxabiso okanye ulwazi lokuba ungathenga phi, zeziphi izixhobo zokusebenzisa, okanye iividiyo zokuba ungayisebenzisa njani le mveliso- le webhusayithi iyincwadana eyidijithali. Ngelixa iwebhusayithi eyilelwe kakuhle, akukho namnye umsebenzi. Ngapha koko, ngabantu aba-4 kuphela abayiphononongeyo imveliso… nohlolo olubi. Eli phepha ngokwenyani liphukile, kananjalo… lichaza ukuba kukho uhlolo olu-0 xa kukho ezi-4.
Ukongeza kwiinkcukacha zobuchwephesha ozifumanayo kwiPhilips, iNewegg inika ithuba lokuthenga, jonga iimveliso ezifanayo, kwaye ubone uphononongo (nangona kungekho nanye). Ukuba ixabiso likaNewegg, ukuhambisa kunye nokubuya komgaqo-nkqubo ulungile- kulapho uphuma khona. Ukuba akunjalo, ubuyela endleleni kwaye ujonge enye indawo yokufumana ulwazi okanye uthenge.
I-CNET: Indawo ekuyiwa kuyo
Ukujonga kuphela kwiziphumo zokukhangela kwaye unokuxela ukuba yeyiphi na inkampani ebeke ngakumbi ekusebenzeni kweinjini yokukhangela. Ungeniso lwe-CNET lunee-snippets ezityebileyo zokuphononongwa kunye namaxabiso, kunye nokubhala kuvunyelwe:
Iphepha lokujonga kwakhona linzulu kwaye liyamangalisa… ngophononongo lwe-CNET, uphononongo lomsebenzisi, amagqabantshintshi omsebenzisi, ukubanakho ukulandela utshintsho kwiphepha, ividiyo, izikhombisi ekusebenziseni, ukudityaniswa kwezentlalo (kunye nentsebenzo), iitoni zemifanekiso kubandakanya Inkqubo yemenyu, iinketho ezininzi zokuthenga, amaxabiso angoku, isishwankathelo soqwalaselo, uthelekiso nezinye iimveliso, ubuchwephesha bobuchwephesha (ngaphaya kwesiza sePhilips!) ukongeza kuphononongo olunenkcukacha ngumbhali ogama lakhe unefoto kunye nebhayiloji .
Ngelixa ungenakukwazi ukuthenga kwi-CNET, le yindawo ekuya kuyo. Abantu banokutsiba kule ndawo ukucofa iqhosha lokuthenga kwiAmazon okanye kwenye indawo, kodwa kulapho bafumana khona ulwazi abaludingayo kwaye bazakubuya nini kwixesha elizayo.
Eyona nto uyithengayo: Ukusilela
Ukuthenga okungcono akukhathali nokuba uyithengile okanye awuyithenganga… bakuphela kwentengiso entsha. Ke-yilibale inyani yokuba ndinemivuzo yeKhadi lokuThenga okungcono kwaye ndingafuna ukufumana ulwazi olongezelelweyo kuthengiso endilwenzileyo kwivenkile yakho. Akukho sophu yakho.
UPhilips unokwakha iphepha elimangalisayo- kunye nevidiyo, imiyalelo, izixhobo kunye novavanyo oluzimeleyo ziinkokheli zeshishini. Okanye banokwenza ezinye iisayithi kunye nokuphononongwa kwiphepha. Mhlawumbi eyona nto inomdla kakhulu engekhoyo kukukwazi ukubona amaxabiso kwaye ucofe ukuthenga kwiivenkile eziphethe imveliso.
Ukuba i-CNET inokuba yinzuzo ngokuthembela kwintengiso kunye neengeniso ezibandakanyekayo, ngokuqinisekileyo iisayithi ezingasentla zinokuphucula amaphepha azo ukulungiselela zonke izinto kunye nomxholo oyimfuneko ukuze ube yindawo ekuyiwa kuyo.
Ungayakha njani indawo yakho ukuze uqiniseke ukuba yindawo ekuya kuyo iindwendwe eziphanda okanye ezenza ukuthenga kwishishini lakho? Ndicinga ukuba iinkampani ezininzi zijonga ngokwazo njengokuphuma kwaye bajonge ukutshatisa okanye ukubetha ukhuphiswano lwabo ngokuba ngu bhetele Phuma. Kutheni ungabi yindawo oya kuyo?